क्याप्टेनबारे अनमोलकाे खुलासा, झरनाकाे छाेरीसँग च्याटमा व्यस्त, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
क्याप्टेनबारे अनमोलकाे खुलासा, झरनाकाे छाेरीसँग च्याटमा व्यस्त
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रका पछिल्लो समयका लोकप्रिय अभिनेता अनमोल के.सीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राम्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् । नेपाली चलचित्रमा मात्र नभएर विभिन्न ब्राण्डको एम्बेसडरको रुपमा पनि उनी अगाडी बढिरहेका छन्।
डाबर कम्पनीको प्रो स्टाइलमा उनी दुई वर्षको लागि अनुबन्ध भैसकेका छन् भने अझै दुई वर्षको लागि अनुबन्ध हुने भएका छन्। अनमोल अहिले चलचित्र क्याप्टेनको सुटिंगमा व्यस्त छन् । क्याप्टेनको अधिकांश सुटिंग सकिएको र अबको १५ दिन सम्ममा सबै सुटिंग सकिने उनी बताउँछन्।
अनमोल स्कुल पढ्दा बास्केटबल खेल्ने गर्थे, जसले गर्दा फुटबल उनको लागि नयाँ थियो। तर फुटबल खेलाडीहरुबाट नै प्रशिक्षण लिएर चलचित्रमा खेल्न पाउँदा उनी आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छन्। सम्पन्न फिफा विश्वकप २०१८ मा अनमोलले अर्जेन्टिनालाई समर्थन गरेका थिए, तर अर्जेन्टिना भने दर्शकको अपेक्षा अनुसार अगाडी बढ्न सकेन। उक्त प्रसङ्गमा अनमोलले हारेपनि आफूले अर्जेन्टिनालाई नै समर्थन गरिरहने बताएका छन्।
अनमोल ए मेरो हजुर ३ को लागि समेत अनुबन्ध भएका छन् । ए मेरो हजुर ३ तीन महिना पछि छायांकनमा जाने बताइएको छ। ए मेरो हजुर ३ मा अनमोल संगै अभिनेत्री तथा निर्माता झरना थापाकी छोरी सुहाना थापाले अभिनय गर्नेछिन्। अनमोलले सुहानासंग भेट नभएपनि इनटरनेटमा च्याट हुने गरेको बताएका छन्।